Xisbiyada Mucaaradka Kenya oo Taageeray Shaqo Joojinta Macalimiinta – Radio Daljir
Xisbiyada Mucaaradka Kenya oo Taageeray Shaqo Joojinta Macalimiinta
Seteembar 2, 2015 4:59 b 0
Arbaco, September 02, 2015 (Daljir) — Qaar ka mid ah axsaabta siyaasada ee garabka mucaaradka iyo ururada shaqaalaha dalka ayaa taageero xoog leh u muujiyay macalimiinta qaranka ee la tacaalaya muranka la xiriira mushaar kordhintooda ee ay dowladda kula jiraan.
Xisbiga ODM ayaa shaaca ka qaaday sida ay u taageersanyihiin macalimiinta iyo mowqifkoodaba.
Xog hayaha guud ee xisbigaasi Ababu Namwamba ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka dowladda kasoo yeeray ee ah in aysanm heynin lacag lagu kordhiyo mushaarka barayaasha, taasoo ku kacaysa ilaa 17 billion oo shilin.
Sidoo kale ururka shaqaalaha ee COTU ayaa iyana dhankooda dhawaajiyay in macalimiinta ay u qalmaan mushaar kordhinta ay maxkamada u amartay ee ah 50% ilaa 60%.
Macalimiinta ayaa maanta galay maalintii 3-aad oo ay ku guda jiraan shaqa joojin dalka oo dhan ah, iyagoo wali ku adkeysanaya in aysan fasallada tagi doonin ilaa iyo inta muhsaarkooda dheeraadka ah ay ka helayaan.
Murankaan ayaa hada mar kale dib ugu laabtay maxkamada ugu sarreysa dalka ee Sureme Court, taasoo dhawaan amartay in dowlada ay mushaarka macalimiinta bixiso.
Gudiga dowlada u qaabilsan adeega macalimiinta ee TSC ayaa maxkamada ugu sareysa ka codsaday in ay dib u eegis ku sameyso go’aankeeda, iyadoo masuuliyiinta ururada macalimiintana ay durba isku daygaasi kasoo hor jeesteen.
Madaxweyne Gaas oo Bursaalax iyo Deegaano kale lagu soo Dhaweeyay